Njirimara nke ụlọ nkwari akụ na-enweghị ụmụaka ma ọ bụ ndị okenye naanị Akụkọ Njem
N’oge na-adịbeghị anya, ewebatala ihe omume ụfọdụ na họtelu ụfọdụ ndị edegharịrị aha hotels na-enweghị ụmụaka ma ọ bụ ndị okenye naanị. Hotelslọ oriri na nkwari akụ ndị a nwere njirimara kachasị nke ịbụ oghere nke ọ na-agaghị ekwe omume ịnọnyere ụmụaka, nke mere na ndị okenye nwere ike ịnụ ụtọ gburugburu ebe obibi. Ọ bụ echiche na ọtụtụ ndị njem na-achọ isi na ezumike nke ọgba aghara nke ụlọ jupụtara na ezinụlọ.
na Hotels na-enweghị ụmụaka bụ nnukwu ihe ọzọ mgbe a bịara n’ịnọgide, ọkachasị ma ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ udo dị ukwuu yana gburugburu okenye. Mana ụlọ oriri na ọ offerụ theseụ ndị a na-enye ọtụtụ ihe, na mgbakwunye na enweghị ụmụaka, yana onyinye enyere ndị okenye ka ha nwee obi ụtọ ahụmịhe.
1 Hotels maka ndị okenye
2 Di na nwunye na-agba ume hotels
3 Hotels maka oriri
4 Kedu ọrụ ha na-enye
5 Kedu ihe kpatara ịnọ n'ụlọ nkwari akụ na-enweghị ụmụaka
Hotels maka ndị okenye
Ugbu a Họtelu ndị okenye naanị ma ọ bụ na-enweghị ụmụaka pere mpe, ebe ọ bụ na ha anaghị anọchite anya ihe karịrị 5% nke onyinye ahụ, n'agbanyeghị na ọganiihu ha na-eto eto ha nwere ike ịga n'ihu na-eto eto. Otú ọ dị, enweela ọtụtụ esemokwu banyere ya. Ọ bụ eziokwu na ịmachi akụkụ nke afọ iji nọrọ bụ ịkpa ókè ruo n'ókè ụfọdụ ma e nwere ndị mkpakọrịta na-ekwu okwu megide ya. Mana n'ezie enweghị iwu na-ekwu maka ihe ụlọ nkwari akụ ndị a nwere ike igbochi ma ọ bụ na ọ bụghị, n'ihi ya, ha na-egwu egwu na ahịa nke na-arị elu na nke na-arịkwa elu.
Ugbu a enwere ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari akụ ndị ezubere maka ezinụlọ, ọkachasị na ebe ndị njem nleta kachasị, yabụ enweghị nnukwu mmegharị megide ọdịdị nke ụlọ oriri ndị a maka ndị okenye naanị, ebe ọ bụ na ha pere mpe. N'ezie, dị ka Facua si kwuo, ha enweghị ike igbochi ịbanye ezinụlọ na ụmụaka ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịnọ, mana ọ ga-abụ ihe nzuzu n'ihi ha enweghị ọrụ ndị dị mkpa maka ụfọdụ ụmụaka.
Di na nwunye na-agba ume hotels
Typesdị ụlọ oriri na ọ usuallyụ usuallyụ ndị a orie di na nwunye, ebe ọ bụ na izu ike na ọnọdụ ịhụnanya na nke dị jụụ na-achọ. Ọ bụ ezie na a na-ere ha dị ka ebe dị jụụ maka izu ike, eziokwu ahụ bụ naanị naanị ndị toro eto na-anabata ya anaghị eme ka obi sie gị ike na enwere obi iru ala. Lọ oriri na ọ Hotụ thatụ ndị a na-enye maka ndị di na nwunye na-enyekarị ha ụlọ ọrụ iji nọrọ ezumike ha na-enwe ọmarịcha ọrụ.
N'ime ụdị ụlọ oriri na ọ youụ youụ ị nwere ike chọọ nlebara anya nke onwe. Ọrụ ndị mmadụ na-enwekarị dịka nkata nnabata. N'otu aka ahụ, na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ thereụ enwere menu maka ndị okenye yana ohere ị drinkingụ mmanya na-aba n'anya n'oge ọ bụla.
Na ụlọ nkwari akụ ndị a, ọ nwere ike ịbụ ihe a na-ahụkarị oghere dị ka spa na saịtị. Spa bụ ebe anaghị anabata ụmụaka, yabụ ịnụ ụtọ ntọala ya bụ ihe echebere ndị okenye. Ọgwụgwọ mara mma na izu ike enyere mgbe ụfọdụ maka ndị di na nwunye. Nchịkọta na-awa maka ọnụnọ, na-enye na iche iche ọgwụgwọ. Ọ dịghị ihe dị mma iji mechaa izu ike karịa ịhịa aka n'ahụ ndị di na nwunye. N'aka nke ọzọ, ụlọ nkwari akụ ahụ nwere ike ịnwe oghere ntụrụndụ dị ka ebe igwu mmiri ma ọ bụ ebe mgbatị ahụ, kwadebere maka ndị okenye ịnụ ụtọ ya.
Hotels maka oriri
Echiche ọzọ nke ụlọ nkwari akụ ndị a na-enweghị ụmụaka nwere ike ịkọwapụta bụ nke nnọkọ ndị okenye. Enwere ụlọ oriri na ọ thatụ thatụ nke nwere ndị na-eto eto na-ege ntị ma na-enye egwu ruo etiti abalị, yana mmanya na ebe ntụrụndụ. Na họtel ndị a, ha anaghị elekwasị anya na izu ike, kama na-atọ ụtọ, n'ihi ya ndị na-ege ha ntị bụ otu ndị enyi na ndị na-eto eto. Dabere n'ụdị onyinye ha nwere, akụrụngwa ha ga-adị iche ma a ga-akpọsa ya n'ụzọ dị iche iche.
Kedu ọrụ ha na-enye
A na-ahụ ụlọ nkwari akụ ndị a site n'iche ndị toro eto na ụlọ ọrụ na ọrụ ha. Dị ka anyị na-ekwu, n'ozuzu ha enweghị ike igbochi ntinye ụmụaka, mana oghere ha adịghị njikere maka ha. Ha enweghị ọrụ maka ezinụlọ, dịka ọrụ nlekọta nwa ma ọ bụ ọrụ nlekọta ụmụaka. Ha nwekwara klọb ụmụaka, menus ụmụaka, ọdọ mmiri ụmụaka ma ọ bụ ogige. Ha agaghị enye cri ma ọ bụ ihe ndị ọzọ iji kwado ọnụnọ ezinụlọ nwere ụmụ, ebe ọ bụ na a na-akpọsa ha dị ka oghere na-enweghị ụmụaka.
Kedu ihe kpatara ịnọ n'ụlọ nkwari akụ na-enweghị ụmụaka
Ọ bụ ezie na enyere ha ohere ka ha zuo ike, nke bụ eziokwu bụ na ha bụ naanị ụlọ nkwari akụ pụrụ iche n'otu ụdị ọha mmadụ. Tupu ị na-ekpebi na otu, ị ga-ele anya na ya akụrụngwa na-ekwu nke ndị ọrụ ndị ọzọ na-iche iche echiche. Oghere ndị a nwere ike ọkachamara na ndị na-eto eto, ndị di na nwunye ma ọ bụ na njem okomoko ma ọ bụ ntụrụndụ. N'ụzọ doro anya, ihe niile dabere na ihe anyị na-achọ, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ugbu a na-echekwa onwe ha ma bụrụ ndị ọkachamara na ndị na-ege ntị iji mee onwe ha ọdịiche. N'ihi ya, ọganihu nke na-apụta gburugburu hotels na-enweghị ụmụaka ma ọ bụ naanị maka ndị okenye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Njirimara nke ụlọ nkwari akụ na-enweghị ụmụaka